Dowlada Ethiopia oo lagu eedeeyay inay isir sifeyn ku hayso dadka Tigreyga ah - Home somali news leader
“Bravo,” Macron told workers on the Notre-Dame roof two years after…
Home NEWS Dowlada Ethiopia oo lagu eedeeyay inay isir sifeyn ku hayso dadka Tigreyga...
Warbixin qarsoodi ah oo ay diyaarisay dowladda Mareykanka, islamarkaana uu helay wargeyska The New York Times ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay wado “olole nidaamsan oo ah isir sifayn” iyadoo loogu ganbanayo dagaalka gobolka Tigray, oo ah aag ay inta badan gacanta ku hayaan maleeshiyada Amxaarada ee waqooyiga dalka.
New York Times ayaa sheegaysa in warbixinta, oo la qoray horaantii bishan February ay “si adag u qeexeyso dhul iyo guryo la bililiqaystay iyo tuulooyin cidla ah oo tobanaan kun oo qof aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin.”
Sida lagu sheegay warka uu qoray wargayska New York Times, warbixinta ayaa lagu ogaaday in saraakiisha Ethiopia iyo dagaalyahannada maleeshiyada xulafada la ah ee ka soo jeeda gobolka deriska ah ee Amxaarada, kuwaasi oo usoo dagaal tagay gobolka Tigray si ay u taageeraan Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, ay “si ula kac ah oo buuxda uga dhigayaan Galbeedka Tigray meel ay qowmiyad gaar ah degto iyagoo adeegsanaya awood abaabulan iyo cabsi gelin.”
Warbixinta ayaa sheegaysa in dadka qaar ay u qaxeen duurka ama ay si sharci daro ah ugu tallaabeen dhanka dalka Suudaan, halka qaar kalana la soo aruuriyay oo si qassab ah loogu raray goobo kale oo ka tirsan Tigray, sida uu qoray wargaysku.
Xoghayaha Arimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in Mareykanku uu “aad uga walaacsan yahay warbixinnada la xiriira xadgudubyada iyo guud ahaan xaaladda ka sii dareysa ee Tigray.”
Colaadda hubaysan ee ka jirta Tigray ayaa galaafatay nolosha kumanaan qof. Taasi ayaana keentay in boqolaal kun ay ka cararaan guryahooda. Gobolka oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo qof ayaa waxaa soo foodsaartay cunno yari, biyo iyo dawo la’aan.
Previous articleFaahfaahin ka soo baxaysa dad lagu diley maanta magaalada Muqdisho
Next article‘Milk Tea Alliance’ activists demonstrate across Asia against Myanmar’s coup
Isbedel iyo Isku Shaandheyn lagu sameeyay qaar ka mid ah saldhigyada Booliska gobolka Banaadir
Duqa Muqdisho oo xarriga ka jaray Garoonka Kubbadda Cagta Kaaraan